Furidzira Kuumbwa michina ine maviri matanda, iyo nyowani modhi yekambani yedu, ndiyo maviri-nhanho muchina unoshandiswa preform yePET, PP mabhodhoro, uye nekuvhuvhuta kwemamineral mabhodhoro emvura, mabhodhoro ezvinwiwa nemimwe midziyo ine yakaoma. Iyo inotenderera Inomhanya Heater inoshandiswa kupisa preforms yebhodhoro, uye Mold Clamping ine Double Crank Arm yaive yakashandiswa kuona kurira kwembanda kweforoma pasi pechisimba. Ose manyore uye semi-otomatiki mashandiro anowanikwa kumuchina uyu. Muchina wedu une zvakwakanakira yekudhura-kuchengetedza, compact muhukuru, inokodzera kushanda, zvine mutsindo uye kuchengetedzeka yakave nechokwadi.
Muchina uyu unosanganisira muchina mukuru uye rotary infrared hita. Matanho maviri kufuridza maitiro ndeiyi: tanga waisa PET preforms mune iyo inotenderera infrared hita kuti unyorove mukati mamiriro akasununguka, wozoisa muforoma yekutambanudza uye ichivhuvhuta kuita chimiro. Kuburikidza pamusoro pezvigadzirwa zvigadzirwa zvine simba rakasimba, kumanikidza uye kujeka kunowanikwa.
Chikamu chekuchinjisa chemuchina chine clamping magnetic valve, pamberi kugadzirisa ndiro, yepakati inoshanda ndiro, kumashure yakatarwa platen, Clamping die cylinder, uye Crankshaft tsvimbo yekubatanidza. Iko kufamba kwepakati kunoshanda ndiro pamberi uye kumashure kunoguma nekuvhurwa uye kuvhara chakuvhe.
Iwo anotambanudza uye anoridza zvikamu zvinoumbwa nekutambanudza humburumbira, kutambanudza tsvimbo, yekuisa chisilinda, kutambanudza magineti vharuvhu, kuvhuna magineti vharafu uye nemhepo nzira system. Panguva yekushanda, vhura iyo inotambanudza magineti vharuvhu uye rega mweya upinze iyo humburumbira pisitoni, nekudaro panguva imwechete kutyaira iyo inotambanudza magineti vharafu uye yekuisa chisimbiso humbwa kudonha pamusoro bhodhoro rinogadzirwa pasi pechimbi chinosunga, iyo yekuvhara chisimbiso inovhara kuvhurwa kwema preforms nekukasira uye nepo ichivhuvhuta yemagineti vharafu ichivhuvhuta preform kuburikidza neyakavharwa musoro kune bhodhoro chimiro sekugadzirwa.
Chikamu chepamberi-chekupisa chinosanganisira Main magetsi emuchina, Frequency Converter, Diki mota uye Heating mwenje chubhu etc.Iyo huru yemagetsi muchina inotyaira cheni vhiri so yekurega mota diki ichitenderedza inobata iyo pavanofamba zvishoma nezvishoma mukudziya nzvimbo yeInfrared hita, kuve nema preforms anopisa zvakaenzana, pakupedzisira kuvandudza mhando yechigadzirwa.
2. Zvinokosha zvinodiwa
Izvo zvakaoma kupa yakatarwa uye chaiyo technical data kune vatengi vedu, nekuda kweiyo mutsauko wepreform uremu, ukobvu hwemadziro uye saizi yebhodhoro, tembiricha yezvakasiyana kugadzirwa saiti zvakare zvakasiyana. Saka zvakakosha kwazvo kuti mutengi akudziridze zvakanyanya yakakodzera tekinoroji paramende ari ega panguva chaiyo yekugadzira maitiro.
Iko kupisa kwe preforms yebhodhoro chinhu chakakosha kune mhando yehombodo inogadzirwa. Isa mu vaviri preforms yekuvapisa uye kuvapurudzira kuitira bvunzo. Kana zvikamu zvakasiyana zve inopisa preform iripo yakasununguka uye haichinji chena, uye bhodhoro rakaputika rine yunifomu kuomarara pazvikamu zvakasiyana, zvinoreva kuti magetsi akaiswa zvakanaka. Nyora iyo voltage yeimwe neimwe chikamu chenguva yekugadzira chirevo.